Chii uye sei iyo ecommerce yekubhadhara yekugedhi inoshanda? ECommerce nhau
Chii uye sei iyo ecommerce yekubhadhara yekugedhi inoshanda?
Chokwadi iwe wakasangana semutengi muzvitoro zvemagetsi, pazviitiko zvakasiyana uye ikozvino zvauri muridzi weumwe wavo, unoshamisika kuti ungavandudza sei ruzivo rwevatengi vako pane yako saiti.
Mutengi anogutsikana i chengetedza mutengi wekushanya mune ramangwana nekutenga, kukosha kwekuwedzera kuburikidza nesocial network kana neshoko remuromo.
Kana mutengi achipinda muchitoro, vanotarisira kuiwana nzwisisa kufamba yeiyo saiti, a dhizaini yakajeka izvo hazvitungamire kuvhiringidzika, sarudzo tsvaga uye zvimwe zvakanangana kana zvisina kunangana zvinovabatsira kuti vagare pane peji rako uye votodzoka.
Kana chitoro chako chiri nzvimbo yakachengeteka, ine kufamba kwakanaka uye nenhumbi dzinobatsira mutengi wako mukufunga kwavo nezve zvigadzirwa uye pakupedzisira kutenga kwavo, haugone kupotsa basa renyeredzi iro pasina mubvunzo iri muripo wegedhi.
1 Ndeipi nzira yekubhadhara?
1.1 Iko kushanda kweyipo yekubhadhara iri nyore.
2 Mutengi ruzivo kana uchibhadhara
3 Ndingaite sei kuti ndiwedzere iyo yekubhadhara gedhi?
4 Zvakanakira nezvayakaipira yechitatu-bato kubhadhara magedhi
La mubhadharo wegedhi ibasa rinoitwa muzvitoro zvemagetsi, kuita kuti zvive nyore kune vatengi kubhadhara. Zvichienderana negedhi rekubhadhara raunoshandisa muchitoro chako, iwe unowana chiitiko chiri nani kana chakaipisisa kune vatengi vako kana zvasvika pakubhadhara.
Zviripachena, izvo iwe zvaunoda ndezvekuti vatengi vako vatarise, vabvunze uye vatenge nenzira yakasununguka, inokurumidza uye yakachengeteka uye kana zvasvika pakubhadhara iwe haudi kuti hunhu huderere. Hazvibatsiri kuva ne dhizaini yakanakisa kana zvigadzirwa zvinonyanya kudiwa, kana kana mutengi wako achida kubhadhara zvemukati mayo mungoro yekutengera, zvese zvinowana kuomarara nezvavanotadza kana kusaziva kubhadhara.
Kana isu tikadzokorora chiitiko chemazana e e-shop vatengi pavanobhadhara, isu tinowana akateedzana matipi uye mazano anozoita kuti chitoro chako ive nzvimbo yakanaka kana uchiita muripo, uchidzivirira kukanganisa kunoitwa nemamwe masayiti nekusanzwisisa mutengi.
Iko kushanda kweyipo yekubhadhara iri nyore.
Kana mutengi apedza kutenga uye obva kubhadhara, anoshandisa dhititi kana kiredhiti kiredhiti nhamba uye anoisa dhata yayo munzvimbo yakakumbirwa nepuratifomu.
El Bhurawuza revatengi rinonyora iyo data kuti riendese kuchitoro kwaakatenga. Izvo encryption inoita kutumira iyo yakachengetedzwa data kuitira kuti irege "kuvanzwa" nevanhu vechitatu uye kuverenga. Kuti unyore data, iyo SSL (Yakachengeteka Socket Layer) kana TLS (Yekutakura Layer Security) system inoshandiswa.
Iye zvino data yemutengi inosanganisirwa muchikuva chekubhadhara muchitoro, icho chakavharidzirwa uye chakachengeteka.
Iyo yekubhadhara chikuva inobata iyo mutengesi webhangi chikuva uye inokupa iyo kadhi yemutengi.
Iri bhangi, zvakare, rinotumira ruzivo ku mutengi chinangwa chipuratifomu, kuona kuti data rakarurama uye kuita mvumo.
Bhengi revatengi rinoongorora iyo data uye kana iri yechokwadi, inotumira mvumo kubhangi remutengesi pamwe neshoko rinotenderwa. Kana bhangi remutengi risingatenderi kushanda, rinotumirawo meseji nechikonzero, semuenzaniso "kushaya mari"Kana kuti"kubatana hakuna kuwanikwa".
Kunyangwe pakutanga pekutarisisa kungaita senge kwakaomesesa mashandiro, zvinongotora masekonzi mashoma kusvika mapuratifomu ese ataure uye bhangi revatengi rinopa meseji inobvumidza kana kuramba basa.
Mutengi ruzivo kana uchibhadhara
Kana isu tichifunga nezve zvishuwo zvevatengi vedu pavanosarudza zvigadzirwa zvatinotengesa, tinovateerera pavanotsoropodza ruvara rwechigadzirwa chedu kana kutipa zano rekuita shanduko muchitoro, hatifanire kufuratira iyo yakakosha chikamu chakakosha chese: kubhadhara.
Mutengi anogara achida taura ruzivo rwako Paunenge wapedza kushandisa saiti uye kana tikaita pfupiso yezvinetso zvawakave nazvo mukushanya kwako uye pakati pazvo kunetsekana kana uchishandisa chikuva chekubhadhara, hachisi chinhu chakanaka.
Mutengi wangu atora nguva yake achifunga zvaari kuda kutenga kubva kwandiri, akaendesa kungoro yake kana bhasiketi rekutenga, akagadzira account yake uye ipapo akagadzirira kubhadhara asi ... zvave zvisingaite nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Chii chichaitwa nemutengi wangu? Chokwadi, izvo iwe zvauri kufunga, achasiya chitoro changu asina kutenga uye zvakare aine chiitiko chakaipa icho iye chaachafara kugovana kune chero anoda kumuteerera.
Nekudaro, zviri pachena kuti pasuwo rekubhadhara rakaipa muchitoro chedu chinhu chinotarisa uye icho inopindira yakananga mukutengesa kwakashata kwechitoro chedu.
Zvimwe zvakashata zvevatengi zvinoitika kana zvasvika pakubuda zvinofanirwa kukuisa iwe kure kuitira kuti chitoro chako chisakanganisa zvakafanana. Ngatitarisei zvimwe zvezvinetso zvinoratidzwa nevatengi pavanoshandisa nzira yekubhadhara.
"Zvinoita sekunge ini hazvigamuchike kuti chitoro chemagetsi hachina mukana wekubhadhara kuburikidza nePayPal. "
"Paunenge uchiedza kubhadhara nekadhi, inodzosera mhosho meseji uye ini ndakayedza nayo nemakadhi akati wandei. "Hauchakwanise kutambisa imwe nguva kuyedza kubhadhara."
"Chikamu chekubhadhara hachiratidzike kunge chakachengeteka kwandiri, chine dhizaini yandisati ndamboona uye handivimbe zvakanyanya."
“Kana ndasarudza nzira yekubhadhara, inonditumira kune peji riri kunze kwechitoro kana ndikapa chiziviso uye handivimbe nacho."
Ndingaite sei kuti ndiwedzere iyo yekubhadhara gedhi?
Isu tatova pachena kuti isu tinoda kuti vatengi vedu vave nerwendo rwakanaka muchitoro chedu, kubva pakutanga kusarudza zvigadzirwa, kubhurawuza, kubvunza mibvunzo uye pakupedzisira kubhadhara. Ikozvino kwasara kuzviita.
Kutanga iwe unofanirwa kucherechedza kana rako rekubhadhara gedhi riine chero eaya mhosho:
Zvakaoma kana kuvhiringidza kushandisa
Inoonekwa isiri panzvimbo kana isina kugadzirwa zvakanaka kana
Dzorera kune mamwe mapeji asina avian mutengi
Chete neimwe yeaya akapfuura kesi ingangove chikonzero chakaringana kuti uchinje zvinhu, kana zvikadaro, iwe ukawana zvese zvikanganiso musuwo wako wekubhadhara, zviri pachena kuti vatengi vako vari kusiya chitoro chako zvinotyisa ... vasina kutenga.
Izvo zvakakosha kuti iwe utore matanho uye kugadzirisa yako yekubhadhara suo. Saka kuti vatengi vako vasavimbe uye voita kuti mubhadharo wavo uve wakachengeteka uye pasina kudhonza bvudzi ravo, unofanirwa kutora matanho:
FIRST_ MHARIDZO DZEMHURI DZEMHURI. Dzese nzira dzekubhadhara dzakajairika dzinofanirwa kupihwa, uchishandisa marogo anozivikanwa neziso rakashama (Visa, Mastercard ...), kuti usatsause mutengi. Paunenge uchibhadhara uye ukakurumidza kuona mucherechedzo wekadhi rako, unonzwa kuzivikanwa uye hausi kunze kwenzvimbo.
Yechipiri_REDIRECTION ziviso. Kana iwe wakasarudza yekubhadhara sarudzo iyo yaunotumirwa zvakananga kune iyo peji kana sevha yemunhu ari kupa iyo kubhadhara (senge PayPal), zvakakosha kuti iwe utaure izvi kumutengi wako neshoko repop-up rinovazivisa. Iwe unofanirwa kuziva kuti kuti upedze mutero wekubhadhara, iwe uchaenda kune imwe peji kunze kwechitoro chako, asi kuti zvakachengeteka. Paunoshandisa mapuratifomu ekubhadhara anotumira peji ravo kumutengi wako, senge PayPal, inowanzo kuve yakawedzera kuvimba kune mutengi, nekuti iri rinozivikanwa uye rakachengeteka peji rekubhadhara.
CHITATU_ KUSHANDISA LOGOSI DZAKANAKA. Paunoshandisa logo uye mutengi akadhinda pairi kuti ubhadhare, inofanirwa kunge iri chengetedzo yekubatanidza ine SSL chitupa. Iwe unongofanirwa kutenga chitupa cheSSSL ndokuchisimudza muchitoro chako kuti uve nechokwadi chekushambadzira kwevatengi vako.
Zvakanakira nezvayakaipira yechitatu-bato kubhadhara magedhi
Sezvatakambotaura kare, mu dzimwe nguva tinoshandisa nzira dzekubhadhara dzakadai sePayPal, iyo inoshandisa peji rayo kuita muripo, saka mutengi achamanikidzwa kusiya chitoro chaanga achitenga, kuti akwanise kubhadhara. Izvo zvakakosha kuti ugare uchizivisa mutengi kuti ari kuzosiya chitoro chako kuti apinde chimwe, asi iwe unofanirwa kugara uchimuzivisa kuti kutengeserana kwese kuri 100% kwakachengeteka.
Kune rimwe divi, itsika yakachengeteka kwazvo, nekuti unodzivirira kuita zvitupa zvekuchengetedza sezvo chikuva chekubhadhara pachacho chine ivo. Iwe unodzivirira mutengi kuti apinze yavo yemunhu uye yekubhadhara data, nekuti yavo dhititi kana kiredhiti kadhi yatove yakabatana kune yekubhadhara chikuva.
Kukanganisa kweyechitatu-bato kubhadhara magedhi:
Havasi vese vatengi vanobvuma vachida Siya peji rekupinda rimwe uye kubhadhara, kunyangwe kana zvichizivikanwa.
Zvinoshamisa kutumira vatengi vako kubhadhara imwe nzvimbo kunze kwechitoro chako.
Zvakanakira yechitatu-bato yekubhadhara magedhi:
Kana chikuva iwe chaunoshandisa kuitira kuti vatengi vako vagone kubhadhara muchitoro chako, ndizvo anozivikanwa sePayPal, Google Wallet kana Stripe, mutengi anonzwa akachengeteka zvakanyanya.
Mune mamwe países, Kubhadhara kuburikidza nevechitatu-bato mapuratifomu, ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye yakavimbika kubhadhara. Kana iwe uchizotengesa kune dzimwe nyika, tsvaga kana vachifunga kuti mapuratifomu akachengeteka kupfuura ezvitoro pachawo.
Zvingani mashoma masikirini ita kuti mutengi afambe, zvirinani. Nekuvatumira kune imwe chikuva kuti vabhadhare, iwe unorerutsa maitiro ese.
Iwe unodzivirira mutengi nzira refu ye kunyoresa uye kupinda kwe data izvo zvinogona kuita kuti vafunge kaviri nezve kuramba uchitenga kuchitoro chako.
Kugumisa: Chikamu chakakosha mune ruzivo rwevashandisi vechitoro chako, iri gedhi rekubhadhara, dzidza mushe nzira dzaungashandisa, uye inopa ruzivo rwekukurumidza uye rwekuziva uye nzira, uye mwero wako wematiroko ekusiya zvekutengesa uchaderera, uye kugutsikana kwevatengi vako kuchawedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Nzira dzokubhadhara » Chii uye sei iyo ecommerce yekubhadhara yekugedhi inoshanda?
Pandakaisa nzira yekubhadharira Cardinity muchitoro changu chepamhepo, ndakaona kukwira kuwedzera mukutengesa nekuti vatengi vangu vane mukana wekubhadhara nemakadhi echikwereti kana echikwereti.
Luis Carrasco Guillen akadaro
Ndatenda zvikuru neruzivo. Ini ndaive nekakavhiringidzika pakati peiyo yaive yekugedhi rekubhadhara uye chii chaive processor yekubhadhara Nyaya yacho yakazojekeserwa kwandiri.
Pindura Luis Carrasco Guillén
Manuel Rodriguez akadaro
Kuti ndigadzire iyo itsva yekubhadhara gedhi, ndinofanira kuinamatira mune yekubhadhara processor banking system? Zvakanaka kana zvakaipa?
iyi nzira yakapusa kana kuti yakaoma, muguatemala?
Pindura Manuel Rodriguez
Antonio Jaramillo akadaro
Ndatenda zvikuru neruzivo rwakanakisa.
Pindura kuna antonio jaramillo
Fernando Carne akadaro
Pindura Fernando Carna
Dzvanya, chishandiso chakasimba chekuongorora cheEcommerce
Maitiro Ekukwikwidza Kupokana neBig Ecommerce Retailers